ग्यास्ट्रिकबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् चिकित्सकका सुझाव - Health Today Nepal
ग्यास्ट्रिकबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् चिकित्सकका सुझाव
May 9th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
काठमाडौ,बैशाखः पेटमा हुने एकप्रकारको इन्फेक्सनलाई अम्लपित्त अर्थात् ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ । हाम्रो पेटमा एक किसिमको एसिड (अम्ल) उत्पादन हुन्छ, जसले खाना पचाउनेदेखि खानासँगै पेटमा गएका ब्याक्टेरियालाई मार्नेसम्मको काम गर्छ । यदि, पेटमा अम्ल उत्पादन बढी भएमा त्यसले तन्तु जलाउँछ । जसलाई सामान्य भाषामा ग्यास्ट्रिक भएको भनिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक भएमा पेट फुल्ने वा भरिएको अनुभव हुने, खाना राम्रोसँग नपच्ने हुन्छ । लामो समयसम्म खाना नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहने समस्या हुने गर्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई बाधा पु¥याउँछ । जसले शरीरमा रगत र क्याल्सियमको कमी हुने र अल्सर र क्यान्सरसम्म निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।
ग्यास्ट्रिक हुनुको प्रमुख कारण खानपानमा गडबडी नै हो । जे पायो त्यही खाने, कहिले धेरै खाने वा खाना नै नखाने, बढी मसालेदार खाना खाने गर्नाले ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ ।
त्यस्तै, धेरै तारेको खानेकुरा खाने गर्नाले पनि ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । फास्टफुड र जंकफुडको अत्यधिक सेवनबाट समेत ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ ।
दीर्घरोगका लागि सेवन गरिने कतिपय औषधि पनि ग्यास्ट्रिकको कारक हुन सक्छ । खासगरी पेनकिलर बढी खाएमा ग्यास्ट्रिक हुन्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ, लागुपदार्थ र मदिरा सेवनका कारणसमेत ग्यास्ट्रिक हुन्छ । कहिलेकाहीँ तनावका कारणले समेत यस्तो समस्या देखिन्छ । पेटको र खाद्यनलीको क्यान्सरले पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ ।
समयमा खाना खाने वा सन्तुलित आहार गर्ने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ । यसबाहेक अत्यधिक चिल्लो, पिरो र अमिलो खानेकुरा नखाने अर्थात् साधारण खानाको सेवनले ग्यास्ट्रिक हुनबाट बचाउँछ । रक्सी, चुरोटजस्ता पदार्थको सेवन नगर्ने र चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र पेनकिलर खाने गर्नाले यसबाट बच्न सकिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक बिग्रिएमा अल्सर र क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ । अल्सरका कारण अत्यधिक रक्तश्राव भएर मानिसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । पछिल्लो समय बजारमा राम्रो गुणस्तरको औषधि पाइने भएकाले ग्यास्ट्रिकको समस्या पहिलेभन्दा निकै कम भएको पाइन्छ ।
ग्यास्ट्रिक भएको सुरुवाती चरणमै खानपान व्यवस्थित र औषधि सेवन गर्ने हो भने यो समयमै निको पार्न सकिन्छ । इन्डोस्कोपीबाट चेकजाँच गरी ग्यास्ट्रिकको चरण पत्ता लगाएर उपचार गरिन्छ । सुरुको चरणमा एसिड उत्पादन कम गर्ने औषधिको सेवनबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।
अल्सर भएमा रक्तश्रावले समस्या आउने भएकाले छुट्टै उपचार गरिन्छ । यसबाहेक क्यान्सर नै भइसकेको चरणमा शल्यक्रियाका माध्यमबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Previous article बेवारिसे र असहाय मानसिक रोगीको उपचार सरकारले गरिदिने
Next article राजधानीका ११ वटा सरकारी अस्पताल वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध,प्रहरीले २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने
पोषणको ‘अर्थ’ र प्रश्नहरू
हातखुट्टा मर्किए के गर्ने ?
हाँस्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा
May 12th 11:58 AM
रेम्डिसिभिरको मूल्य, प्रति भाइल ४९०० रुपैयाँ मात्र
May 12th 10:56 AM
देभभरि ‘रेड अलर्ट ’ घोषणा गर्दै जनताको जीवन रक्षाकालागि पहल गर्न चिकित्सक संघको अपिल
May 11th 9:11 AM
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
May 11th 8:49 AM
‘ धेरै आत्तिएर पेनिक एट्याक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोभिडलेभन्दा आत्तिनुको कारणले स्वास्थ्य जटिल हुन्छ । ’
May 10th 5:07 PM
कोरोना संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा बस्दा अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले यी उपाय अपनाउनुस्
May 10th 11:59 AM
अक्सिजन अभावमा शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया ठप्प
May 10th 2:50 AM
जिल्ला अस्पतालबाट भेन्टिलेटर फिर्ता लैजाने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रति बैतडी कांग्रेसको विरोध, जिल्लामै जनशक्ति माग